> Resource > iCloud > hab fudud Maamul iCloud Xiriir
Ma uploaded oo dhan xiriirada iPhone si aad u iCloud? Waa hagaag, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad u maareyn, oo ay ku jiraan gurmad, biirtay iyo tirtirka. Si loo maareeyo xiriirrada iCloud, halkan, waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin ah tababaraha xiriir iCloud - TunesGo Wondershare .
Tababaraha waxa uu ku siinayaa awood ay ku raad raac ah oo dhan ama soo xulay xiriirada in iCloud in file CSV, ama hal ama dhowr ah file a vCard (s), ama Outlook, Windows Cinwaanka Kitaabka iyo Windows Live Mail. Intaa waxaa dheer, in aad edit karaa iCloud xiriirada info, midowdo xiriirada iCloud nuqul ama tirtirto xiriirada aan waxtar lahayn iCloud in ku muujisan yihiin aad iPhone, iPad ama iPod taabto.
Download software si la isugu dayo xiriir maaraynta ee iCloud.
Fiiro gaar ah: TunesGo kaa caawinaysaa in aad xaalkaa, ka saar ama ku milmaan xiriirrada iCloud tusay aad iPhone, iPod taabto ama iPad. Laakiin xiriirada iCloud in server shabakadda lama dhiganta updated.
Sida loo maamulo xiriirada iCloud
Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka kuu sheegaysa sida loo raad raac iCloud xiriirada si CSV ama file vCard (s), tirtirto ama ku milmaan iCloud xiriirada koobi.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo si buuxda u taageersan iPhone 4s, 5c iPhone, iPhone 5s, iPad mini, iPod xiriiri 5 iyo wixii la mid ah. Hel info dheeraad ah oo ku saabsan aaladaha Apple taageeray.
Tallaabada 1. Isku ku iPhone / iPod xiriiri / iPad in kombiyuutarka
First of dhan, heli iPhone, iPad ama iPod taabto xiran deeruhu cable USB ah in kombiyuutarka. TunesGo goobtii lagu ogaan doonaa iDevice ka dibna waxa ay u muujiyaan in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Maamul xiriirada in iCloud
Hadda, waxaan kuu sheegi doonaa sida loo maareeyo xiriirrada in iCloud in faahfaahinta. Marka hore, hubi in aad saxiixday galay aad iCloud account aad iPhone, iPod taabto ama iPad. Markaas, waxaad tagtaa "Xiriirada". Sida uu "Xiriirada" category, aad arki doonaa kooxda xiriir iCould. Riix kooxda in ay tusi doono oo dhan xiriirrada iCloud on Murayaad saxda ah.
Xiriirada kaabta in iCloud in badan / a file vCard hal ama file CSV.
Dooro xiriirada doonayo ama dooran dhammaan dadka ay khuseyso. Guji "Import / Dhoofinta"> "Dhoofinta soo xulay Xiriirada" ama "dhoofinta Dhammaan Xiriirada"> "A vCard File Single," in Multiple vCard Files ", ama" si CSV File ". Browse your computer si aad u hesho gal ah si loo badbaadiyo file dhoofiyo vCard (s) ama file CSV.
Dhoofinta iCloud xiriirada in Outlook, Windows Live Mail iyo cinwaanka Window Book.
Sidoo kale, guji "Import / Dhoofinta". In liiska jiido-hoos, doortaan "dhoofinta Dhammaan Xiriirada" ama "Dhoofinta Xiriirada soo xulay". Marka liiska la jiido-hoos u soo muuqda, waxaad dooran kartaa in xiriir dhoofinta iCloud in Outlook 2003/2007/2010/2013, Outlook Express, Windows Live Mail iyo Windos Cinwaanka Book.
Xiriirada Edit iCloud.
Dooro xiriir ah. On khaanadda saxda ah, guji "Edit". Daaqadda pop-up ee Edit Contact, waxaad kala sooci karo xiriirada by Magaca awoowe ama magaca hore, ku qor lambarka telefoonka, cinwaanka email, cinwaanka guriga, koox xiriir, magaca shirkadda iyo dheeraad.
Midowdo xiriirada iCloud nuqul.
Guji "De-nuqul". TunesGo ogaan doonaa oo tusi doono oo dhan xiriirada guuriyeen furmo pop-up ah. Markaas, dooro nooca ciyaar iyo xiriirrada nuqul aad ku socoto inay la midowdo. Guji "midowdo soo xulay".
Isku day TunesGo in ay isku dayaan maaraynta xiriirrada iCloud.